I-Balcón al mar (Ukufinyelela okuqondile olwandle) - I-Airbnb
I-Balcón al mar (Ukufinyelela okuqondile olwandle)
Jabulela ukubukwa okumangalisayo kweMedithera kuleli fulethi elisenkabeni yeTorremolinos imizuzu emi-4 nje ukusuka eCalle San Miguel futhi nokufinyelela okuqondile olwandle. Itholakala endaweni yasemadolobheni yaseLa Roca futhi inedamu lokubhukuda nendawo yokupaka
Iphuli ivula kusukela ngoMeyi 15 kuya ku-Okthoba 15
Ifulethi linazo zonke izinsiza zokujabulela iholidi elinethezekile: I-SmartTV ene-Netflix, i-Wi-Fi yesivinini esikhulu, ephephile, isiyolisa umoya, ukufudumeza, ... Inamagumbi amabili okulala anomatilasi ababili abanethezekile. Ikhishi elihlome ngokuphelele: umenzi wekhofi we-capsule, iketela, i-toaster, i-mixer, i-juicer, ihhavini ye-microwave, umshini wokuwasha, umshini wokuwasha izitsha, ifriji, ifriji, njll.
Ngaphezu kwalokho, inamasevisi alandelayo:
-Ukwazi ukufinyelela mahhala endaweni yokupaka yangasese emgwaqweni wokuya emadolobheni, ezingadini, echibini lomphakathi (evuliwe kusukela ngoMeyi 15 kuya ku-Okthoba 15), endleleni yangasese eya ogwini, ku-elevator yangasese eya ogwini, ukuze ukwamukela yokudlela pool.
-Amaphilisi okwamukela mahhala ekhofi, itiye, ushukela namanzi amaminerali.
-Umbhede nesihlalo esiphezulu, sicele uma usidinga.
-Ukuhlanza okuphrofessional endaweni ngayinye ebekiwe ngokubulala amagciwane efulethini lonke.
Indawo yayo nge nokufinyelela kwangasese Bajondillo lolwandle, imizuzu embalwa kusukela La Carihuela, imizuzu emi-5 kusukela isitimela sendawo, futhi imizuzu 4 kusukela maphakathi, kwenza kube ehlukile best ukuvakashela okungcono ngaphandle komuzi, ukungcebeleka eduze ukuvakasha kanye nambitha izitsha zemigoqo ezungezile.
Ungangithinta ngocingo nganoma yisiphi isikhathi osidingayo. Uma udinga usizo noma izeluleko zami kokuthile ngingakujabulela ukukusiza.
Inombolo yepholisi: VTF/MA/41086